Siciid Cabdullaahi Deni oo Madaxweynaha Puntland ku eedeeyey dagaalada Cagaare- DHEGAYSO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Siciid Cabdullaahi Deni oo Madaxweynaha Puntland ku eedeeyey dagaalada Cagaare- DHEGAYSO
Siciid Cabdullaahi Deni oo Madaxweynaha Puntland ku eedeeyey dagaalada Cagaare- DHEGAYSO
December 24, 2017 - By: HORSEED STAFF
Siyaasi Siciid Cabdullaahi Daani oo horey u soo noqdey Wasiir iyo Xildhibaan Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waraysi uu siiyey Idaacadda SBC ka hadley dagaalada ka dhacaya deeganaada Cagaare iyo Qorille ee dhulka hoostaga Soomaali Galbeed ama Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Siciid Cabdullaahi Daani ayaa sheegay in dagaaladaas laga lee yahay dano gaar ah oo ay jiraan cid hurinaysa oo isku gubeysa dadka walaalaha ah.
Siyaasi Daani ayaa Madaxweynaha Puntland ku eedeeyey dagaaladaas, waxaana uu meesha ka saarey in dagaaladu salka ku hayaan daaqsin iyo biyo ee ay jiraan gacmo kale oo ku jira meesha oo dano siyaasadeed kale.
Waxaa nasiib darro ah iyada oo dad masuuliyiin ah ay halkaas ka dhawyihiin oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha Puntland in arrintaas la xakameyn waayo, waxaana ay muujineysaa in aan masuuliyadii sidey ahayd loo gudaneyn, laguma mar marsiyoon karo aanooyin hore ayaa jira ama muranku daaqsin ayuu ku saabsan yahay, waxaana halkaas ka muuqanaya faro gurracan ayuu yiri Siciid Cabdullaahi Daani
Siciid Daani ayaa sheegay in ay muhim tahay in xal laga gaaro dagaalada, cidii jebisana la isugu tago dagaaladaas.
Dadka deegaankaas waxay wada noolayeen iyaga oo dalka maamulo jirin, xeer iyo wanaag bay ku noolaayeen maamulku in uu uga daro maaheyn ayuu yiri, iyada oo aragti siyaasadeed iyo dano gaar ah laga lee yahay ayuu yiri Siciid Dani.
Deegaanada lagu diririyo ayaa ah dhulka ay ka taliso Itooobiya oo aan hoos imaan maamulka Puntland ama Somaliland, Itoobiya waxay horey uga digtey in Puntland ciidamadeeda ay halkaas geyso.
Dagaaladan ayaa socdey muddo ka badan 15 sano, marar badan ayaa heshiis laga gaarey, waxaana hadda loo ballan sanaa in beesha Cumar Maxamuud bixiso 1000 halaad oo mag ah oo heshiiskii hore la xiriira, ka hor inta aan malayshiyo ka soo jeeda beesha Dhulbahante aysan 10 qof oo reer guuraa ah ku dilin deeganadaas maalmo ka hor, taas oo sababtey in dagaaladu dib u qarxaan.
Dowladda deegaanka Itoobiya ayaa horey u ballan qaadey in ay deeganadaas geyneyso ciidamo ilaaliya heshiiskaas, taas oo aan marna dhicin.
Hadalka Siyaasi Dani oo la sheegayo inuu murashax u yahay xilka Madaxweynaha Puntland 2019 ayaa kusoo beegmay xili Madaxweyne Cabdiweli Gaas uu ku sugan yahay degmada Burtinle ee gobalka Nugaal.
Madaxweynaha Puntland ayaa dib u dhigay safar uu ku tagi lahaa Gaalkacyo isagoo weli ku sugan Burtinle halkaasi oo uu ka wado dadaal lagu nabadeenayo beelaha dirirtu dhexmartay, mana cada sababta siyaasi Dani uu eeda xiisadaasi dusha uga saaray Madaxweynaha.
Dhegayso Waraysiga Siyaasi Siciid Dani.